အစားအစာ - Bezzia | Bezzia
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသော်လည်း အစားအသောက်များတွင် ၂၄ နာရီကာလအတွင်းသက်ရှိများကိုပေးသောအစားအစာပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကုသမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းထားရန်အာဟာရအလုံအလောက်ပေးသည်။
ဤအပိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းများကိုပြောပါမည် ဝမ်းစာထောက်ပံ့ကြေး ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်စီမံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိပေးလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာကျော်မြေထဲပင်လယ်အစားအစာများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အာဟာရကျွမ်းကျင်သူများမှ တန်ဖိုးအရှိဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။...
အစားအသောက် စတင်ခြင်းရဲ့ ခြေလှမ်းကို လှမ်းပြီးပြီလား။ ဒါဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် အစားအသောက်များထဲမှ တစ်ခုကို Sirtfood ဟုခေါ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် လူသိများသော နောက်လိုက်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်...
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အတူ ကယ်လိုရီလိုငွေပြရန် လိုအပ်သည်။ တခြားသူမရှိရင် မလုပ်တတ်ဘူး..။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သော လျှို့ဝှက်ကယ်လိုရီများကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ရှာဖွေတဲ့အခါ ကယ်လိုရီလိုငွေပြတဲ့ အစားအသောက်တွေအပြင်...
Dukan အစားအသောက်- ၎င်းသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသနည်း။
por Miriam Guasch လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Dukan Diet သည် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာကို အခြေခံထားသောကြောင့် အလွန်အကျွံမစားခြင်း၏ အားသာချက်ဖြစ်သည်။
ဤပါတီပွဲများအပြီးတွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆိပ်ထုတ်ရန်သန့်ရှင်းသောအစားအစာပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းကတော့…
ခရစ္စမတ်မတိုင်မီ ကိုက်လန်အစားအစာကို ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ခရစ္စမတ်မရောက်မီ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုပါက ဤစူပါကျန်းမာသော အစားအသောက်ကို လက်မလွတ်စေနှင့်။ အဆိုပါ…
Dolphin အစားအသောက်- ကြာရှည်ခံတဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
por Miriam Guasch လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
လင်းပိုင်အစားအစာသည် ဤလှပသောတိရစ္ဆာန်၏ စွမ်းအင်နှင့် တက်ကြွမှုကို အမှတ်ရစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းသည် "လှိုင်း" လမ်းကြောင်းကို အတုယူသည်..။
DASH ဓာတ်စာသည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
DASH အစားအသောက်ကို XNUMX ခုနှစ်များက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် ...
၅: ၂ အစားအသောက်သည်တကယ်အလုပ်ဖြစ်သလား။
အစာရှောင်ခြင်း၊ အစာမစားဘဲအစာရှောင်ခြင်း (သို့) ၅: ၂ အစားအစာတို့သည်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုအမည်သတ်မှတ်ခြင်းကွဲပြားသည်။
အကြိုနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုမှ hematomas များအတွက်ရောင်ရမ်း anti- ရောင်ခြည်